Wasiirka Arimaha Dibada Somaliland Oo Gaadhay Wadanka Niger Oo Hogaamiyeyaasha Afrika Ku Shirayaan | Warmaalnews.com
Wasiirka Arimaha Dibada Somaliland Oo Gaadhay Wadanka Niger Oo Hogaamiyeyaasha Afrika Ku Shirayaan
Wasiirka arimaha dibabada somaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon ayaa socdaal shaqo ku gaadhay wadanka Niger ee ku yaala galbeedka Afrika, halkaas oo uu ka furmay ay yeelanayaan hogaamiyeyaasha qaarada Afrika.
Warar laga helay socdaalka wasiirka ayaa sheegay in markii uu gaadhay wadanka Niger ay qaabileen dhigiisa dalkaasi Ibrahim Yacoubou iyo masuuuliyiin kale oo ka tirsan dawlada wadankaasi.
Sidoo warka ayaa sheegaya in ujeedada ugu weyn ee wasiirka arimaha dibada somaliland u tagay wadanka Niger ay tahay sidii uu shir doceedyo ula yeelan lahaa hogaamiyeyaasha wadamada Afrika ee ka qayb galaya shirka si uu u gaadhsiiyo qadiyada somaliland.
Wasiir Faratoon ayey qorshaha ugu jirtaa inuu kulamo la qaato masuuliyiinta ay u suura gasho ee ka qayb galaya shirka, isaga oo dedaal ugu jira in hogaamiyeyaasha Afrika uu gaadhsiiyo fariimo la xidhiidha qadiyada somaliland.
Shirkan Hoggaamiyeyaasha Afrika ayaa muddada uu socdo lagu wadaa In lagu dhaqan geliyo qorshaha lagu asaasayo suuqa xorta ah ee Ganacsiga dalalka Qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo (AfCFTA).
Waxa kaloo shirku dejinayaa halka fadhigoodu noqon doono guddida Midowga Afrika u qaabilsan suuqa xorta ah ee ganacsiga Afrika.